Qaramada Midoobay oo soo dhaweysay Ansixintii Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble – HalQaran.com
Qaramada Midoobay oo soo dhaweysay Ansixintii Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble
Muqdisho (Halqaran.com) – Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay tallaabada Xildhibaanada Golaha Shacabka codka kalsoonida ku siiyeen Ra’iisal Wasaaraha cusub ee dalka, Maxamed Xuseen Rooble.
Madaxweynaha JF Somaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Arbacadii maanta Ra’iisal Wasaaraha horgeeyay Xildhibaanada Golaha Shacabka, iyadoona uu codka kalsoonida u weydiiyay.
Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya ayaana si aan kala har lahayn kalsoonida u siiyay Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Mudane Rooble, isagoona isla goobta lagu dhaariyay.
War qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska UNSOM ee Magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in Maxamed Xuseen Rooble uu si rasmi ah u xaqiijiyay inuu yahay Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya.
“Bahda Qaramada Midoobey ayaa hambalyo diiran u direysa Maxamed Xuseen Rooble oo si rasmiya u xaqiijiyay inuu yahay Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, waxayna u rajaynayaan guul xilli uu bilaabayo doorkiisa hoggaamineed ee muhiimka ah waqtigan xasaasiga u ah Somaliya.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in Qaramada Midoobey is garab taagi doonto Ra’iisal Wasaare Rooble, isla markaana ay iskaashi la yeelan doonto.
“Qaramada Midoobey waxay ballanqaadaysaa inay garab istaagayso, iskaashina la samayn doonto Ra’iisal Wasaaraha.” Ayaa lagu sheegay warka caawa ka soo baxay Xafiiska UNSOM.
Ugu dambeyn, Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa guda galaya soo xulista Golihiisa Wasiirrada, waxaana uu ballanqaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh.
Tags: Ansixintii R/wasaare Rooble, beesha calaamka, soo dhaweyn